2009-09-13 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
mail ​ကို ​အ​ခု​မ​ပို့​ဘဲ ​နောက်​မှ ​ဘယ်​လို ​ပို့​မ​လဲ ​နှင့် Outlook express ​မ​ဟုတ်​တဲ့ Thunderbird
anti.spy11@gmail.com: ​အ​ကို ​ကျွန်​တော်​လေ mail ​ပို့​ချင်​လို့ ​အဲ​ဒီ့ mail​ကို ​ရောက်​ချင်​တဲ့​နေ့​မှ ​ရောက်​စေ​ချင်​တယ် ​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ ​ဟင်
Outlook express ​အ​ကြောင်း​ကို​တော့ ​ဒီ​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ .
​ဒါ​က​တော့ ​ညီ​လေး ​လား ​ညီ​မ​လေး​လား​တော့​မ​သိ​ဘူး ​တစ်​ယောက် ​မေး​လာ​လို့ ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​တာ​ပါ .. ​ကျွန်​တော်​တို့ ​အ​နေ​နဲ့ ​မေးလ်​တွေ​ကို ​အ​ခု​အ​ချိန်​မှာ ​မ​ပို့​ချင်​ဘူး . ​နောက် ၁ ​နာ​ရီ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​နောက်​ထပ်5​နာ​ရီ ​အ​စ​ရှိ​သ​ဖြင့်​ပေါ့ . ​အဲ့​လို​အ​ချိန်​မှာ ​အ​ချိန်​ကိုက် ​ပို့​ချင်​တယ် . ​တစ်​ကယ်​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ Blog post ​ကို ​အ​ချိန်​ကိုက်​ပို့​ရ​တာ ​လွယ်​ကူ​ပေ​မယ့် . mail ​ကျ​တော့ ​နဲ​နဲ ​အ​လုပ်​ပို​သွား​တယ် . ​လူ​တော်​တော်​များ​များ​က ​ဒါ​ကို ​သိပ်​စိတ်​မ​ဝင်​စား​ကြ​တာ​လဲ ​ပါ​မယ်​ထင်​ပါ​တယ် . ​ဟုတ်​တယ်​လေ ​မေးလ်​ပို့​တာ​ပဲ ​ဘယ်​အ​ချိန်​ပို့​ပို့ ​အ​တူ​တူ​ပဲ​ဟာ​ကို​လို့ ​ထင်​ကြ​မှာ​ပါ . ​ဒါ​က​လဲ ​မွေး​နေ့​တွေ​အ​တွက် ​ပို့​ပေး​တဲ့​မေးလ်​မျိုး​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​အောင်​လို့ ​ရေး​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ . ​ဘ​လောဂ်​မှာ​တော့ ​ဘယ် Blog ​မှ ​ရေး​ထား​သေး​တာ ​မ​တွေ့​လို့ ​ပြန်​ရေး​လိုက်​တာ​လဲ ​ပါ​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​ပါ​စေ​ဗျာ ... ​နောက်​တစ်​ခု ​ပြော​ချင်​တာ​က Outlook express ​ကို ​သုံး​ဖို့​အ​တွက် ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ပါ​ဘူး​ဆို​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက်​လဲ ​ဒါ​လေး​က outlook express ​ထက်​ပို​ကောင်း​တဲ့ ​အ​ဆင်​အ​ယဉ်​တွေ​နဲ့ ​အ​တော်​လေး ​လှ​ပ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် . Firefox ​ဆို​တော့ ​သိ​တဲ့​အ​တိုင်း​ပဲ​လေ . ​လုပ်​ပေး​လိုက်​ရင် ​အ​လန်း​တွေ​ချည်း​ပဲ . Firefox ​ကို ​သ​ဘော​ကျ​တဲ့​သူ ​လက်​ညှိုး​ထောင်​ဆို​ရင် ​မောင်​ညီ​နေ​မင်း ​က ​ထပ်​ဆုံး​က ​ပါ​ပြီး​သား​ပဲ .. ​ကျွန်​တော်​က​တော့ Firefox crazy ​သ​မား​လေ . ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​လို့​မေး​ရင် ​အ​ဖြေ​က ​ရှိ​ပြီး​သား​ပဲ Add-ons ​ရဲ့ ​အား​သာ​ချက်​တွေ​ကြောင့်​ပေါ့ . ​ကဲ​ပါ ​အောက်​မှာ ​လုပ်​နည်း​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​သေ​ချာ​ဖတ်​ပြီး​လုပ်​လိုက်​ပါ ..
(၁) ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး Thunderbird ​ကို Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ .
(၂) ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ရ​လာ​တဲ့ Thunderbird ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
(၃) Outlook express ​မ​သုံး​ချင်​သူ​များ​နှင့် ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​သူ​များ ​လဲ ​ဒီ Thunderbird ​ကို Outlook express ​နည်း​တူ ​အ​သုံး​ပြု​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော့်​အ​ထင် Outlook express ​ထက်​ကို ​ပို​ကောင်း​သေး​တယ်​ဗျ . ​သူ့​မှာ​က add-on ​ပါ​တယ်​လေ ..
(၄) ​အ​ခု​ဆို​ရင် Thunderbird ​အ​တွက်​တော့ ​အို​ကေ​သွား​ပြီ . ​ပြီး​ရင် ​အောက်​က​ပေး​ထား​တဲ့ sl8tr.xpi Add-on ​ကို Download ​ထပ်​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​လင့်​က​တော့ ​အ​ရင်​က​တိုင်း ၃ ​နေ​ရာ​က​နေ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် .
​ပြီး​သွား​ပြီ​လား ​ပြီး​သွား​ရင် Thunderbird ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ ..
(၅) ​ပုံ​ထဲ​မှာ​ပြ​ထား​သ​လို​မျိုး Tools >> add-on ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ
(၆) ​ပြီး​ရင် Add-ons >> install ​ကို ​နှိပ်​ပြီး ​အ​ပေါ်​က Download ​လုပ်​ယူ​ထား​တဲ့ sl8tr.xpi ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၇) Open ​ကို ​နှိပ်​ပြီး Add-on ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ ..
(၈) Thunderbird ​ကို restart ​လုပ်​လိုက်​ပါ ...
​အား​လုံး​အို​ကေ​သွား​ရင် ​အောက်​က​အ​တိုင်း ​စ​လုပ်​ပါ​တော့​မယ် .
(၁) Write ​ကို ​နှိပ်​ပြီး mail ​စ​ပို့​ပါ​တော့​မယ် .
(၂) ​သူ​က ​ကို့​အ​ကောင့်​ကို ​တောင်း​ရင် ​ပို့​မယ့် email ​အ​ကောင့်​ကို ​ဖြည့်​ပေး​လိုက်​ပါ . gmail ​ဆို​လဲ gmail ​ပေါ့ .
(၃) ​ပို့​မယ့်​မေး​လိပ်​စာ​ဖြည့် ​ပို့​မယ့်​စာ​သား​ရေး​သား​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ရေး​သား​မယ့် font ​ကို ​ပြောင်း​လို့​လဲ ​ရ​ပါ​တယ် . zawgyi ​ဆို​လဲ zawgyi ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ
(၄) File >> sent later (ctrl + shift + return) ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၅) ​ကဲ ​အဲ့​မယ်​ပေါ်​လာ​တဲ့ Sent this email later ​ကို​တဲ့ Box ​အ​ကွက်​မှာ ​စာ​ဖတ်​သူ​ပို့​ချင်​တဲ့ ​အ​ချိန် ​ရက်​စွဲ ​တွေ​ကို ​ဖြည့်​ပြီး​ပို့​လိုက်​လို့​ရ​ပါ​ပြီ . ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​ကြ​ပါ​စေ​ဗျာ .. ​အောက်​မှာ ​ပုံ​တွေ​နဲ့ ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ် .
nanoonaw: ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ Password ​က ​အ​မည်း​စက်​က​လေး​တွေ ​ကို​ဖော်​ကြည့်​တဲ့ software ​ရှိ​ရင် ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ
​ကျွန်​တော် ​ဒီ​ပို့စ် ​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ ​သေ​ချာ ​မ​ရှာ​လို့​ဖြစ်​မှာ​ပါ .
​မင်း​မင်း: ​ကျွန်​တော်​ဒီ​မှာ winXtheme Os ​ကို​ဒေါင်း​လော့​လုပ်​ပြီး၊ install ​လုပ်​တာ​အ​ကို​ရေ start Menu ​ဘား​ပျောက်​သွား​လို့ ....
​ကျွန်​တော်​အ​ကြံ​ပေး​ချင်​တာ​က​တော့ system restore ​ပြန်​လုပ်​လိုက်​ကြည့်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​မှာ​ပါ .
system restore ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် . Start >> Programs >> Accessories >> system tools >> system restore ​ကို ​ရွေး​ပြီး ၂ ​ရက်​လောက် ​နောက်​ပြန်​ဆုတ်​ပြီး restore ​ပြန်​လုပ်​လိုက်​ပါ .
soco : IDM ​ကို ​ဘယ်​လို့ Update ​လုပ်​ရ​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ့​လား
​စာ​အုပ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ကို့​ဟာ​ကို ​ဖတ်​ပြီး ​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ . Download ebook from ifile.it
​မြတ်​ကို​ကို : portable ​ကို​ဘယ်​လို​သုံး​မ​လည်း​ဆို​တာ​နည်း​နည်း​လောက်​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ​အ​ကို
Portable ​ဆို​တာ​မျိုး​ဟာ ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ install ​လုပ်​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး .. Flash drive ​မှာ​ပဲ ​ဒီ program ​လေး​ကို ​သိမ်း​ထား​ပြီး ​ကြိုက်​တဲ့​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​သွား​ထိုး​ပြီး ​သုံး​လို့​ရ​ပါ​တယ် .. ​ပေါ့​ပေါ့​ပါး​ပါး​နဲ့ ​သယ်​ဆောင်​ရ​လွယ်​ကူ​တဲ့ portable ​ဟာ​ဆို​ရင် ​အ​ခု​ဆို ​အ​တော်​လေး ​နေ​ရာ​ယူ​လာ​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် .. ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ​ဆို​ရင် computer ​မှာ install ​စ​ရာ​မ​လို​ဘဲ ​ကို​သုံး​ချင်​တဲ့ program ​ကို​သုံး​နိုင်​တယ် .. ​နောက်​တစ်​ချက်​က Program ​အ​ကြီး​လို​မျိုး ​ကြီး​မား​တဲ့​ဆိုက်​မ​ရှိ​ပဲ​တာ​ပါ​ပဲ
​တေ​ဇာ: ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ကို​ညီ​ရေ... window ​အ​သစ်​တင်​လိုက်​တာ ​အ​သံ​မ​ထွက်​ဘူး ........ ​ဘာ​မှ​မ​ကြား ​ရ​တော့​ဘူး​ခင်​ဗျာ ...
​ညီ​ညီ​အ​တွက်​ကို​လဲ ​အောက်​မှာ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .
​အ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​က​တော့ virus ​ကြောင့် window ​တင်​ပြီး​ခါ​ကျ​မှ audio driver ​မ​ရှိ​သူ​များ​အ​တွက် ​ရည်​စူး​ပါ​တယ် . ​အ​ခု​တင်​ပေး​တဲ့ program ​က​တော့ ​ဘယ် audio device ​ကို​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​အ​သုံး​ပြု​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​သံ​မ​ထွက်​သူ​များ ​ထွက်​ကို​ထွက်​လာ​ရ​ပါ​စေ​မည် . ​အာ​မ​ခံ​ပေး​ပါ​တယ် . ​ပြန်​အမ်း​တွေ​တော့ ​အ​စ​က​တည်း​က ​လက်​မ​ခံ​ထား​လို့ . ​ပိုက်​ဆံ​တော့ ​ပြန်​မ​အမ်း​တော့​ပါ​ဘူး . ​လုပ်​နည်း (၂) ​နည်း​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ့​မယ် ..
(၁) ​ဒီ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
(၂) ​ပြီး​လျှင် I accept to the above ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ပြီး Next ​ကို ​နှိပ်​ပါ ​ပြီး​လျှင် ​ကို ​တင်​ထား​သည့် ​ဝင်း​ဒိုး​ကို​ရွေး​ပြီး software ​ကို ​ဒေါင်း​လော့​လုပ်​လိုက်​ပါ ..
(၃) window xp sp-2 ​တင်​ထား​တယ်​ဆို​ရင် xp sp-2 ​နဲ့ ​တန်း​တန်း​က Download ​အောက်​က Go ​ဆို​တာ ​အဲ့​ဒါ Download ​ချ​ဖို့​အ​တွက် ​လင့်​တွေ​ပေး​ထား​တာ​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့​လင့်​က​သာ ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အဲ့​ကောင်​ကို run ​လိုက်​ပါ .. ​အ​သံ​ထွက်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် ... ​တစ်​ချို့ mother board ​တွေ ​ရဲ့ audio ​ရှာ​လို့​မ​ရ​ရင် ​ဒီ​ဆိုက်​က​နေ​ပဲ download ​လုပ်​ယူ​ပြီး ​သုံး​ရ​တာ​ပါ ​ဒီ​ဆိုက်​လေး​က audio ​အ​တွက် board ​အား​လုံး​နဲ့​ကိုက်​ညီ​ပါ​တယ် ... ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ .. audio ​အ​တွက် board CD ​မ​ရှိ​ရင် ​ဘာ​မှ​စဉ်း​စား​မ​နေ​ပါ​နဲ့ realtek ​သာ ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ ...
​ဒါ​က​နောက်​တစ်​နည်း​ပါ ​ကို့ motherboard ​က ​ဘာ​အ​မျိုး​အ​စား ​နဲ့ pc ​မှာ ​တပ်​ထား​တဲ့ hardware device ​တွေ​က ​ဘာ​တွ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို ​စစ်​ဆေး ​ပေး​ပါ​တယ် . ​ဥ​ပ​မာ board audio ​မှာ ​ဘာ​တွေ ​လို​အပ်​နေ​တယ် ​ဆို​တာ​ကို ​စစ်​ဆေး​ပေး​တဲ့ ​အ​ပြင် ​လို​အပ်​နေ​တဲ့ driver ​တွေ​ကို update ​လုပ်​ခိုင်း ​ပါ​တယ် . ​လွယ်​ပါ​တယ် .
​ကဲ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ ...